Iyo nyowani iOS 11 Chikamu chekuchengetedza chinotibatsira kusunungura nzvimbo yemuno pane yedu iPhone kana iPad | IPhone nhau
En IPhone nhau Isu tinoenderera mberi kuyedza yekutanga beta vhezheni yeIOS 11 pamafoni edu epaIpad uye, nekufamba kwemazuva, tinowana dzimwe nhau zhinji kupfuura Tim Cook nevanhu vake vakatiratidza kumusangano neMuvhuro wadarika. Chii chimwe, dzimwe dzenyaya idzi dzisina kutaurwa dzinobatsira zvakanyanya uye dzakakosha, uye ruzhinji rwevashandisi vanozovada zvakanyanya. Iyi ndiyo kesi yezvandiri kuzokuudza nhasi: ndiani asati ambonetseka nezvenzvimbo iripo yekuchengetera pane yavo iDevice?
Zvishoma nezvishoma, Apple iri kusanganisira yakawanda yekuchengetera nzvimbo pa iPhone ne iPad, zvisinei, kunyorera, mumhanzi, data, mapikicha, mavhidhiyo, podcast, nezvimwe, zvinotora nzvimbo yakawanda uye, dzimwe nguva, tinoshamisika. Zvakanaka, iyo nyowani "Yekuchengetedza" chikamu cheMisetti app mu iOS 11 ichatibatsira kusunungura nzvimbo yekuchengetera pane edu zvishandiso iyo yatinogona kushandisa muzvinhu zvinotifadza zvakanyanya. Ngatione kuti izvi ndezvei.
1 iOS 11 inotipa nzira inoshanda yekugadzirisa kuchengetwa kwemuno pane edu zvishandiso
1.1 Otomatiki maitiro
1.2 Zvinobatsira Mazano
iOS 11 inotipa nzira inoshanda yekugadzirisa kuchengetwa kwemuno pane edu zvishandiso
Muvhuro wapfuura, mushure memaawa maviri nehafu ekutanga Keynote, takaguma taguta. Izvi ndizvo zvine Musangano Wepasi Pose Wekuvandudza, unova chiitiko chegore rizere nenhau, zvisinei, gore rino, takaenda kune imwe yeWWDCs yakazara kwazvo mumakore apfuura, ine akawanda matsva maficha maererano ne Hardware (chimwe chinhu chisina kujairika pachiitiko ichi) uye, chokwadika, shawa hombe renhau maererano nesoftware.
Basa rakakura rakatorwa iOS 11, iyo inotevera vhezheni yekushandisa sisitimu yemidziyo yefoni yekurumwa, iyo izvozvi inotanga kuzvitsauranisa pachayo zvakanyanya nemabasa chaiwo uye hunhu zvichienderana nekuti iri iyo iPhone kana iyo iPad. Uye zvakare, kune dzakawanda kwazvo nhau zvekuti chikamu chakanaka chazvo hachina kuverengwa uye nanhasi, mazuva mashanu gare gare, isu tinoramba tichizvisunungura.
Chimwe chinhu chakakosha kwatiri tese, kune chikuru kana chidiki padanho, pane edu zvishandiso ndeyekuchengetedza kwenzvimbo. Apple haina kumbobvira yamira pakuve nerupo zvakanyanya mune izvi uye, kunyangwe ichitopa mamwe maGG mune yedu iPhone nePad, dzimwe nguva tinogona kuperevedza. Kuti isu tirege kuwana zvishamiso zvekupedzisira, iOS 11 inosanganisira a yakavandudzwa chikamu "Kuchengetera" icho chichava chekubatsira kukuru kusunungura yemuno nzvimbo yatiri kugara nezvinhu zvisinganyatsotifadza. Kana, zvirinani, isu tinovafarira kwazvo.
Kuti ujekese zvirinani kuti izvi ndezvei, tarisa unotevera skrini yakatorwa neangu iPad:
Iwo akanakisa manejimendi ekuchengetedza masimba mune edu zvishandiso chinhu chakanyanya kukosha kusimudzira chakaunzwa neIOS 11 (ichiri mubeta) uye izvo, zvakadaro, hazvina kucherechedzwa, nekuti hazvina kutaurwa, panguva yeWWDC.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, kune vashandisi Zvichava nyore kwazvo kwatiri kuti tizive maitirwo atinoitwa munzvimbo iyi ye iPhone yedu kana iPad asi, chii chakanyanya kukosha, kubva ipapo isu tinogona kuenderera kune yemahara yekuchengetera kupi uye kana isu patinoona zvakakodzera. Anonakidza! Chokwadi?
Ichi chikamu chitsva chinotipa yakajeka mifananidzo yekuona izvo zvinotora zvakanyanya kuchengetedza pane yedu kifaa, Mifananidzo, mameseji, Midhiya kana maApplication, senge mu iTunes. Uye zvino tinowana akateedzana e sarudzo dzekugadzirisa maitiro ekusunungura nzvimbo yemuno, zvichibva pane zvatinofarira isu sevashandisi, izvo zvatisingazofaniri kuferefeta nekusunungura nzvimbo nemaoko.
Iyo nyowani system ichatipawo isu matipi anobatsira kwatiri kusunungura nzvimbo yemunoSemuenzaniso, kana hurukuro dziri muMapurogiramu app dziri kutora nzvimbo yakawandisa, iOS 11 inogona kukurudzira kuti isu tibvise zvese hurukuro dzinopfuura gore. Uye kunyange kubvisa kunyorera kwatisina kushandisa kwenguva yakareba tichichengeta iyo data uye gwaro kuitira kuti tirege kurasikirwa nazvo, uye sekutsanangura kwatinoshanda nemumwe wedu Ignacio pano.
Nekudaro, zvinonakidza chaizvo kuona kuti Apple haingopa chete zvishandiso zvine hukuru hwemukati hwekuchengetedza, asiwo panguva imwe chete inovandudza uye simudzira zvirongwa zvako zveICloud zvekuchengetedza uye inopa nzira iri nani yevashandisi kubata kuchengetedza kweedu iPhone ne iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Iyo nyowani iOS 11 Chikamu chekuchengetedza chinotibatsira kusunungura nzvimbo yemuno pane yedu iPhone kana iPad